'क्वारेन्टिनमा ममाथि जबर्जस्ती गर्नेहरुले उन्मुक्ति नपाऊन्'
कोभिड-१९ शुक्रबार, असार ५, २०७७
''म कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहाको क्वारेन्टिनमा बसेको ३१ जेठमा १२ दिन भएको थियो । म भन्दा अगाडि आएकाहरूलाई १३/१४ दिन पुगेको भनेर घर पठाएको देखें। अब दुई दिनपछि त घर जान पाइन्छ भन्ने लागेको थियो । परिवार र बच्चाहरूलाई पनि भेट्न पाएकी थिइनँ । तर, ३१ जेठको राति ममाथि क्वारेन्टिनमै जबर्जस्ती भयो।
म चार महीनादेखि बिरामी छु । छालाको समस्या छ । म भारतमा हुँदा पनि उपचार गराइरहेकी थिएँ । यो घटना भएपछि कहिले पुलिसकहाँ कहिले वकिलकहाँ गर्दा बिमार झन् बढेको छ । हिजो त दिनभरि उठ्नै सकिनँ।
श्रीमानले अर्को बिहे गरेर भारत गएपछि मैले साना छोराहरूलाई साह्रै दुःख गरेर हुर्काएँ । उनीहरूकै भविष्य सोचेर दुई वर्षअघि बैङ्गलोर गएँ । त्यहाँ आफन्त र नातागोता धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरूकै नजिक बसेर काम गरेँ । एक वर्षअघि एकचोटि नेपाल आएर फेरि फर्केकी थिएँ।
बैङ्गलोरमै चार महीनाअघि मलाई छालाको रोग देखियो । त्यसपछि लकडाउन शुरु भयो । केही समय आफ्नै कोठामा र त्यसपछि २४ दिन जति आफन्तकोमा बसेँ । लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने ठेगान नभएपछि नेपाल फर्किएँ।
२० जेठमा नेपाल आइपुगेपछि मलाई सिधै कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका-१ को शहीद स्मृति माविमा बनाइएको क्वारेन्टिन सेन्टरमा लगियो।
३१ जेठको राति मलाई अलि सन्चो थिएन । टाउको साह्रै दुखिरहेको थियो, निदाउन सकिरहेको थिइनँ । रातिको १२ बजेको थियो । त्यहीँ काम गर्ने एकजना ‘स्टाफ’ (स्वयंसेवक) र अर्को ‘म डाक्टर हुँ’ (स्वास्थ्यकर्मी) भन्ने मान्छेले ममाथि जबर्जस्ती गरे।
त्यो ‘डाक्टर’ आएपछि ‘यसले त मलाई बचाउँछ कि’ भन्ने आशा लागेको थियो । त्यसैले उसको नजिकै गएर ‘आफ्नै बहिनी सम्झिएर मलाई बचाउनुहोस् दाइ ! यो राक्षसले मलाई जबर्जस्ती गर्‍यो’ भनेर धेरै बिन्ती गरेँ । तर, त्यसले पनि ममाथि जबर्जस्ती गर्‍यो । ती दुई जनाले मलाई पालैपालो जबर्जस्ती गरेको भिडियो अर्को एक जनाले कोठाबाहिर बसेर झ्यालबाट खिचिरहेको देखेँ।
त्यस दिन त्यो क्वारेन्टिनमा अरू ६ जना पुरुष पनि थिए । त्यहाँ म मात्रै महिला थिएँ । मलाई सबैभन्दा छेउको कोठामा राखिएको थियो । त्यो मध्यरातमा निकै ठूलो पानी परिरहेको थियो । जस्तापाताको छानामा पानी परेर ठूलो आवाज आइरहेको थियो । सबैले ‘मलाई नै दोष लगाउँछन् अब’ भन्ने लाग्यो । मलाई एकदम डर लागिरहेको थियो । मैले ठूलो स्वरले चिच्च्याउन पनि सकिनँ । बेस्सरी डर लागेपछि त चिच्च्याउन पनि नसकिने रहेछ!
मेरो लुगा त्यहीँ कोठाको एउटा कुनामा फालिदिएका रहेछन् । म सम्हालिएर फेरि आफ्नो कोठामा आएँ । बेन्चले ढोका छेकेँ । बेन्चलाई डोरीले बेरेर झ्यालमा बाँधे । अनि त्यही बेन्चमा बसें।
त्यतिवेला तिनीहरू फेरि मेरो ढोकामा आएर मसँग कुरा गर्न खोजिरहेका थिए । मैले ‘भोलि तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ, म के गर्छु’ भनेँ । त्यसपछि त्यो भिडियो खिच्नेले ‘मैले भने जति पैसा दे । अनि बल्ल यो भिडियो डिलिट गर्छु । नत्र भने यो भाइरल गर्दिन्छु’ भन्यो।
‘पख ! भोलि तिमीहरूलाई के गर्छु ?’ भनेर मैले भनेको भन्यै गरेपछि उनीहरू त्यहाँबाट गए।
भोलिपल्ट आइतबार बिहानै मैले भाइलाई फोन गरेर ‘ममीलाई लिएर आइज’ भनें । भाइले ममीलाई लिएर आयो । म राम्रोसँग हिंड्न सकिरहेको थिइनँ। त्यो देखेपछि ममीले मलाई ‘के भयो ?’ भनेर सोधेको सोध्यै गर्नुभयो । त्यसपछि मैले ममीलाई सबै कुरा भन्दै थिएँ, भाइले पनि सुनिहाल्यो । उसले ‘मेरो दिदीलाई यहाँ क्वारेन्टिनमा यस्तो घटना भएछ’ भनेर हल्लीखल्ली गर्‍यो। त्यसपछि त्यहाँका सबै र अरूले पनि थाहा पाए।
दिउँसो धेरै जना वडा कार्यालय गएका थिए । त्यही वेलामा कसैले ढुङ्गा हानेछ । त्यही ढुङ्गाले लागेर मेरो बुहारीको दाहिने गाला र भित्र दाँतमा गहिरो चोट लाग्यो । उपचारको लागि नेपालगन्ज नै पुर्‍याउनुपर्‍यो । दु:खमाथि दु:ख थपियो।
यता, कैलालीमै त्यही राति मेरो स्वास्थ्य परीक्षण भयो । भाइको साथमा गएर इलाका प्रहरी कार्यालय, लम्कीमा किटानी जाहेरी पनि लेखाएँ । पछि, धनगढी गएर सरकारी वकिललाई भेटेर आएँ । अहिले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । मलाई त्यस्तो गर्ने दुई जना र त्यो भिडियो खिच्नेलाई प्रहरीले समातेको छ भन्ने सुनेको छु । ममाथि ‘त्यस्तो’ अपराध गर्नेहरूलाई सरकारले कडाभन्दा कडा सजाय दिनैपर्छ । उनीहरू उम्कन नपाऊन्।
यो घटना भएपछि मलाई एक मनले त ‘भैगो ! चुप लागेर बस्छु, सबैले मलाई नै दोषी मान्लान्’ भन्ने जस्तो लागेको थियो । तर, फेरि अर्को मनले ‘म चुप लागें भने त क्वारेन्टिनमा बस्ने अरू महिलालाई पनि यस्तै हुनसक्छ, त्यसैले बोल्नैपर्छ’ भनेर आँट जुटाएँ । यसमा मलाई आमा र भाइको साथ मिल्यो।
मलाई घरभित्र मेरो परिवारले साथ दिएको छ । छिमेकी र आफन्तले मेरो पक्षमा बोलेका छन् । सबैले मैले न्याय पाउनुपर्छ भनेका छन् । मैले न्याय कहिले पाउँछु?''
(बलात्कार पीडित महिलासँग 'कथा कोरोना 'समूहले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)
कुराकानी मिति: २०७७ असार २, ३ र ४ गते
‘ट्याक्सी चलाएरै गुजारा गर्ने म जस्तालाई गाह्रो भएकाे छ’
अहिले संसार नै कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण आइपरेको महाविपत्तिमा छ । संसारभर संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या चार लाख नाघिसकेकाे छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि हामीकहाँ पनि सरकारले बन्दाबन्दी गरेको छ। जो अहिले तेस्रो महीनामा छ।